गगन थापाको आक्रोस- समाचार लेखेर धन्दा चलाउने ? - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > गगन थापाको आक्रोस- समाचार लेखेर धन्दा चलाउने ?
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले आफ्नो विषयमा आएको समाचार ‘प्रोपोगाण्ड’ भएका बताएका छन् । सञ्चार माध्यममा आएको ‘गगन थापा अमेरिकन एम्बेसीको कि कन्ट्याक’ भन्ने समाचारको खण्डन उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरेका छन् । गरेका छन् ।
समाचार लेख्नेहरुलाई आफ्नो पृष्ठभूमि, अहिलेको भूमिका र ग्लोबल लिडरको विषयमा थाहा हुँदा हुँदै पनि संगठित रुपमा आफूलाई विचलन गर्न खोजेको बताएका छन् । तर, आफू यस्ता गतिविधिबाट विचलित नहुने र निरन्तर राजीतिमा लागि रहने उनले बताए । सनसनी पूर्ण ढंगले आफूलाई अमेरिकन दूतावासको गोप्य सूचनाकर्मीको रुपमा प्रस्तुत गरेर बदनाम गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
‘योङ ग्लोबल लिडरसिपले हर्बट युनिभर्सीटीमा लिएको छात्रवृतिको विषयमा यत्रो चर्चा किन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसअघिका विभिन्न उच्चपदस्थहरुले विभिन्न अवसर पाएका छन् । अनि मैले अवसर पाउँदा चाहिँ एम्बेसीको कि कन्ट्याट हुने कहीँ हुन्छ ?’
’म एउटा सक्रिय राजनीतिककर्मी हो । राजनीतिक भेटघाट स्वभाविक हुन्छ । भेटघाटपछि के भन्ने के न भन्ने मलाई सबै कुरा थाहा छ र गर्दै आइरहेको पनि छु’ उनले भने, ‘यो लेख्नेलाई थाहा नभएको हाइन । केही साथीहरु रिसाएका छन् । मलाई यो पनि थाहा छ । यो घटनाले गगनलाई क्षति गरौँला भन्ने थियो । मेरा लागि यो कुनै अनौठो विषय होइन र केही हुँदैन।’
उनले आफू खुला किताब भएका बताएका छन् । ‘मैले गरेका राजनीति, परिवार सबै खुला छ । एउटा सांसद नेताको रुपमा खुला छु । तर, समाचारमा धन्दा किन चलाई राख्ने ?’ उनले भने, ‘मेरो एउटा राजनीतिक उद्देश्य छ । मलाइ राम्रोसँग थाहा छ । गल्ती, कम्जोरी भएमा सच्याउन लागि सुझाव दिनुहोस् । प्रत्येक प्रश्नको उत्तर दिन तयार छु ।’ नेता भएका कारण आलोचन सहन सक्ने र आफूलाई सच्याउने बाटो पनि तय गर्ने बताएका छन् ।
किन दिए राजदूत प्याकुरेलले राजीनामा ?
नेकपाका सांसदहरूलाई बोल्न रोक, नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्न नपाइने